Ndakazoisvira Mvana yandaifudza: The Full Six Phases – VanodaZvinhu
by DrSviro · May 14, 2014
Mwanasikana akatanga kundibvisawo mbatya dzose achitanga kupuruzira bvudzi repachipfuva changu nechoya changu nekutamba nema nipples angu nerurimi rwake nekukwizira mazamu ake pachipfuva changu wanikwe ini ndongoshona semvura inovira. Akabva ashadabura makumbo ake almost 180 degrees matinji ake nemusombo wake zvikati waya pachena ndokubva andibata muchiuno. Semwana wandaive ndada zviri so natural for a long time, ndakanga ndatononokerwa, ndakasudurudza chiuno changu kumashure zvishoma iye ndokudanazve zita rangu softly ndokuti ”take it easy babe usazondikuvadzawo hanti?” ipapo ndakagutsurira musoro ndokudzosa chiuno changu mboro yakananga pabeche rake, akabata mboro yangu nemaoko maviri ndokuipinza maari very slowly and gently, mboro yakapinda zvekumanikidzira nekunyengetedza nekuti beche rake raiva riri firm risina kudhamba seurimbo.
Ipapo ndakanzwa sendainanairwa nemasvosve muviri wose nzeve dzangu dzikarira gotsi rikati papata nekunakirwa nebeche raitsvedzerera nekuda mboro. Ndakamubata muchiuno ndichidhonzera beche kwandiri ndokumukoira deeply ndichinyudza mboro yese in deep slow thrusts rumwe ruoko ruchitambisa musombo wake (clit**is), akachemerera nekugomera nekukura kwayo mboro. Akandibata magaro angu ose akanyudza minwe yake maari kureva kuti ainakirwa nayo mboro. Haana kunonoka kujaira mboro yangu neniwo ndakabva ndajaira beche rake sevanhu vaiva vadanana kare kare chinyararire. Takakoirana deeply zviuno zvikapisa uku ndichiyamwa mazamu ake, mwana akarova chikapa chakapenga semunhu aibva kumakorekore, chiuno chake chaiita zvekugwina chichitenderera in circles beche riri pazimboro, akakoira mboro achiteedzera rhythm yangu, ndikarikoira zvekunonokera iye ononokerawo, ndikakasika iye aitambisa chiuno nemhata zvimwechetezvo zvekuti tose takanzwa kuwirirana kwemboro nebeche, beche rake haraisvipa mboro yangu, yairamba yakanamatira irimo munyini yake
Apa ndakabva ndaita zenze chairo ndokutanga kuita zvekukodzonga beche nayo mboro zvine simba ndichirova mudhuri wekumusorosoro kwebeche mumativi emuromo wechibereko chake, ndaiti ndikarova divi iri kagumi, ndorova rimwe kagumi ndozorova ipo pamuromo wechibereko chaive chakashama chichikweva tip yemboro yangu iye achingoti ”mboro yako iri kunaaaaka kaaaaani, mboro yako inondinakira kaaaaani…svirisa please, ndisvire kaaaani, koira usamire, ndanzwa kaaaaani, ende unonyatsogona kusvira maiweeee mai kaaaani amaaaaai ndasvirwaaaa” uku kwaive kundikuza ndikafara kuti mukadzi wandinoda anoitawo appreciate kugona kwangu kusvira ondikurudzira. Ipapo ndakabata musoro ndichikwesha beche chiuno changu chichienda from side to side yakazaramo kwekanguva kusvikira atanga kusura nayo mboro. Ndakamutasva sebhiza riri pamujawo pasina tsitsi iye achiridza kamhere kekunakirwa.
Mwana uyu aiita communicate neni pakusvirana achindibvunza kuti ‘‘babe uri kunakirwa nebeche rako heeeeeere? Ndiri kukupa zvaunoda here mudiiiiiwa? Ndoita sei kuti unakirwe more babe? Ndisimudze gumbo here? Ohhh ndanyatsofongora babe achisimudza matako kumboro, Ahhhh unonaka kaaaani’’ ini ndichimupindura kuti ainditapirira zvisingaite kuita sendichataura chicheche ndichimukwira chete pasina zororo. Hakuna mukadzi akambobvira andibvunza kuti ndiri kunzwa sei pakusvirana, she was the first ever! Ndaiti ndikanzwa kuda kutunda ndozvomora mboro ndokoira kumuromo webeche chete nehafu yemboro ndozoinyudza zvakare yese ndichiita move from side to side zvakare ndichikoira beche zviya zvekurisakadza asi rakaramba riri tight around mboro yangu, pandaiita ma shallow thrusts iye akabva agwina muviri wese nekunakirwa, mwanasikana aisunga beche rake pamboro yangu zvine rhythm zviya zvekunzwa kunge mboro yakapfekedzwa a tight ring uku achiita chikapa seasvikirwa……
Takaburuka pasi pa carpet mwanasikana akagara pasi akavhura makumbo zvinonwisa mvura ndokunditi ndipfugame ndakaisa makumbo ake pamusoro pezvidya zvangu iye otsikirira pasi seri kwangu, achibva andikumbira nekazwi katete kuti nditange ndamudya beche ndokuzoti hake ‘‘ohh beche rako, sviiiira wanonoka’’ apa ndopandakaziva kuti mwana wevanhu akanga ava in control pakusvirana kwedu nekuti akabva abatirira maoko ake ese pasi necheshure kwake zvishoma ndokusimudza chiuno chese nebeche rese kwandiri ndokukoira mboro in style, ini ndaive ndangobatirira pamatako ake, ndichitsindira beche nemboro kuita seichatyoka uku ndakavhura matako ake ndichipuruzira kumhata kwake kwaive kwatota nehuronyo hwangu, zvigunwe zvangu zvikuru zvaive zviri pabeche ndakaripanyangura rakanyatsoshama rakazara zimboro rangu, ndakachemerera rurimi rwava panze ndikarwerwa rute ndichiti ‘‘mukadzi wangu kaaani ndakutunda kaaani’’ ndichitunda magaroni ehuronyo kuti tsaa tsaa tsaa mukati mebeche mboro iri pamuromo wechibereko chaikweva mboro, ipapo ndakanzwawo iye ava kuyuwira sekambwanana beche nemboro zvichigwinhirana pamwechete tichitundirana hameno kuti kechingani mu hour nehafu yataikwirana. Takatarisana mumaziso tichitundirana kudaro tikanyemwererana tikaudzana kuti ndinokuda so much uku dikita richierera richirova pamazamu ake, ndakanzwa beche rese rapisa uye razara huronyo hwangu kuti tundu, humwe huchierera kuenda kumhata yake. Ipapo ndakamutsvoda zvine simba kwekanguva tikabva tangowira pasi tapera simba iye akandisunga nemakumbo ake ose ndokumbokotsira hedu
Chikwengu: FINAL PHASE
by DrSviro · Published May 18, 2016
by DrSviro · Published August 3, 2015